Guddoomiyaha baarlamaanka HirShabeelle oo ka hadlay shirka ka socda Garowe – Kalfadhi
Guddoomiyaha baarlamaanka HirShabeelle oo ka hadlay shirka ka socda Garowe
Sheekh Cusmaan Barre Maxamed Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka HirShabeelle ayaa faah faahin ka bixiyay shirka Guddoomiyaasha Golayaasha xeer dejinta Soomaaliya maalintii 3aad uga socdo magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland.
Sheekh Cusmaan oo wareysi gaar ah siiyay Kalfadhi ayaa sheegay in shirkaan sanadkiiba 2 mar la qabto islamarkaana looga hadlo wadashaqaynta Golayaasha xeer dejinta Soomaaliya ee heer dowlad Gobaleed iyo heer Federaal, sidoo kalane xooga lagu saaray sidii ay isugu xernaan lahaayeen Golayaasha dalka.
“Ujeedada shirkaan waa sidii ay isugu xernaan lahaayeen Golayaasha xeer dejinta dalka ee heer dowlad Gobaleed iyo heer Federaal, wanaajinta xiriirka labada dhinac” ayuu yiri Sheekh Cusmaan Barre oo la hadlay kalfadhi.
“Waa shir sanadkiiba 2 mar la qabto sida ku cad heshiiskii aan galnay waxaana ku kalsoonahay in la isku wareysan doono wixii qabsoomay iyo wixii caqabado ah oo jira” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Guddoomiyaha baarlamaanka HirShabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed oo la hadlay Kalfadhi.
Waxaa sanadkii 2aad shirkaan ka maqan Guddoonka Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kale sanadkaan shirka waxaa ka maqan hogaanka baarlamaanka maamulka Galmudug oo khilaaf ka dhaxeeyo aawgeed uga soo qayb gali waayay sida lagu shaaciyay Shirka markii uuu furmay laba maalin ka hor balse lama oga sababtii markii 2aad ay uga maqanyihiin Aqalka Sare.
“Ma ogin sababta markii 2aad Aqalka Sare uga maqanyihiin shirkaan, balse Galmudug khilaaf ka dhax jira ayaa saameeyay oo ay uga baaqsadeen imaanshiyaha Shirkaan” ayuu Kalfadhi u sheegay Sheekh Cusmaan Barre.
Mar aan weydiinay caqabadaha ku hor-gudban shirkaan ayaa ku jawaabay. “ma jirto wax caqabad ah oo hada nagu gudban balse waa dhici kartaa caqabad sababtoo ah shaqo walba caqabad ayey leedahay” ayuu yiri Guddoomiyaha baarlamaanka HirShabeelle oo wareysi siiyay Kalfadhi.
Maanta ayaa lagu wadaa in la soo gaba-gabeeyay Shirkaan islamarkaana laga soo saaro Warmurtiyeed ku cad waxyaabihii lagu heshiiyay inta uu shirka socdo sida uu noo sheegay Guddoomiyaha baarlamaanka Maamulka HirShabeelle oo wareysi gaar ah siiyay Kalfadhi.
Hal sano kadib iscasilaadii Jawaari, maxaa iska badalay Shaqada Golaha Shacabka
Golayaasha xeer-dejinta dalka oo isku raacay in hay’adaha fulinta gacan lagu siiyo dhamaystirka federaalaynta
Golayaasha xeer-dejinta dalka oo isku raacay in hay'adaha fulinta gacan lagu siiyo dhamaystirka federaalaynta